Harvey ayaa Jimcihii ku dhufan kara Texas duufaan | Saadaasha Shabakadda
Harvey hadda, sida niyadjab kuleyl ah
Hadda Harvey waa sida murugada kulaylaha biyaha gacanka Mexico kadib markii ay dib u cusboonaysiisteen. Khatarta ugu weyn ayaa ah inay ku dhufan karto Mareykanka duufaan. Hadda u soo guuraya jihada waqooyi-galbeed xawaare dhan 15km / saacaddii. Waxay ku taal masaafo 800km u jirta Port Oconnor, Texas, dhanka koonfur-bari.
Qeyb ka mid ah xeebta Mexico iyo Gobolka Texas waxaa lagu ilaalinayaa duufaanta xoogga leh, tan kale qaybta waqooyi ee gobolka Texas duufaanka ilaalada hadda la dhajiyay. Marka loo eego qaababka uu u socdo, Harvey wuxuu ku sii jeedaa xeebta Texas galabnimada Jimcaha. Roobabka Harvey daadi kara waxay sababi kartaa daadad khatarna ku ah dadka, khubarada ayaa yiri.
Habka mustaqbalka Harvey
48 / 72da saac ee soo socota, Harvey waxay noqon doontaa duufaan sida saadaashu tahay
Marka loo eego qiyaasaha la samayn karo, lagu arki karo sawirka, roobab culus ayaa ka di'i doona meelaha inta badan qalalan. Waxay kaloo sababi doontaa hirar waaweyn iyo mowjado saameyn ku yeelan doona xeebaha Texas, Louisiana, iyo waqooyiga-bari ee Mexico. Sidoo kale waa in la ogaadaa in asalka Harvey uu ku jiro hadhaagii duufaantii kulaylaha ee laga abuuray usbuucii hore Caribbean-ka.
Xilligan sagaalaad ee duufaanada ee Kareebiyaanka waxay bilaabatay Abriil, oo wata duufaan kuleyl badan oo Arlene. Way dhacday bil ka hor sidii caadiga ahayd. Midkan sidoo kale waxaa raacay kuwa kale, sida Bret, Cindy, duufaan kale oo aan helin in lagu naanayso, Don, Emily iyo Franklin, oo aan faallo ka bixinaynay.
Xilliga duufaannada oo si rasmi ah u bilaabanaya 1-da Juun kuna eg 30-ka Nofeembar, waxay leedahay illaa maanta 8 duufaano, 8 niyad-jab, 2 duufaanno, oo 3 ka mid ah kuwan ay dhul-fadhiisteen. Waan sii wadi doonaa faallooyinka wixii dhacdo ee dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaanada Kulaylka » Harvey ayaa Jimcihii ku dhufan kara Texas duufaan
Sicirka Gaaska ee NOAA wuxuu kordhayaa 40% ilaa 1990
Saxaraha Atacama wuxuu umuuqdaa ubax